ညနက်ကြီးမှဗိုက်ထဆာတတ်တဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် ? ? တကယ့်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ B2O – FoodiesNavi
ညနက်ကြီးဗိုက်ထဲ တဂွီဂွီမြည်လာပြီဆိုရင် ? တော်တော်လေးခံစားရခက်လှပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေလည်းပိတ်လောက်ပြီဆိုပြီး ?‍♀️ မနက်မလင်းမချင်း ဗိုက်ဆာတာကိုအောင့်အီး ??‍♂️ ကြိတ်မှိတ်နေစရာတော့မလိုပါဘူးနော်။ ညနက်တွေမှာပါ အစားအသောက်ကောင်းကောင်းတွေစားပြီး ပျော်ပါးနိုင်ဖို့ Foodies Navi ကနေဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုကို လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ ?‍♀️ ဒီဆိုင်လေးကတော့ ညဘက်ကြီးမှဗိုက်ထဆာတတ်တဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် ⏰ ည(၁၀)နာရီကနေ မနက်(၂)နာရီအထိ အစားအသောက်ကောင်းကောင်းလေးတွေရရှိနိုင်မယ့် B2O Roof ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲကွန်းခန်းလေးထဲမှထိုင်ပြီး အေးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ သုံးဆောင်နိုင်သလို ? အပေါ်ထပ်အမိုးဖွင့်လေးမှာ လေတဖြူးဖြူးလေးနဲ့ငြိမ့်ချင်ရင်လည်းရသေးတယ်နော်။ ညနက်အချိန်ကြီးမှာမှ ငါးခူစစ်စစ်နဲ့ချက်ထားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကို ? ပဲကြော် ၊ အီကြာကွေး ၊ ဘူးသီးကြော် ၊ အိုးဘဲဥ ၊ မန္တလေးပြကြော်အစုံးအလင်တွေနဲ့ သုံးဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတာ အိပ်မက်ထဲသွားစားနေရသလိုပါပဲနော်။ မုန့်ဟင်းခါးတင်မကသေးပါဘူး ? ။ ဝက်သားဒုတ်ထိုး ၊ ထမင်းမြေပဲဆီဆမ်းလေးနဲ့ လက်ပံပြားကြက်ကြော် ၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်စတဲ့ အစားအစာတွေကိုလည်း အရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
Wifi Free လည်းရတော့ ညဘက်အိပ်မပျော်လို့ အပျင်းပြေသွားမယ်ဆိုရင်လည်း Wifi လေးသုံးရင်း အစားအသောက်တွေကို ? ဇိမ်ရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရသာကပြည့်စုံကောင်းမွန်သလို Service ကလည်းရှယ်ဖော်ရွေတော့ တစ်ခါသွားဖူးရုံနဲ့ ညဘက်တွေစောစောမအိပ်ဘဲ ထပ်ထပ်သွားဖြစ်ဦးမှာအသေအချာပါပဲနော်။ ညဘက်ကြီးဖွသ့်ထားတယ်ဆိုလို့ စျေးကြီးမယ်လည်းမထင်လိုက်နဲ့နော်။ စျေးနှုန်းအသင့်အတင့်လေးနဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိနိုင်မှာပါ။ ? B2O Roof ရဲ့လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၈၄) ၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမဘေး ၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရားရှေ့ ၊ SSC ဆေးရုံနှင့် ရွှေဂုံတိုင်ဟိုတယ်ကြား ၊ Cafe 20 အပေါ်ထပ် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/b20roof